तुलसीको पात खादा हुन्छ शरिरलाई यति धेरै फाइदाहरु, जान्नुहाेस् ! | स्वास्थ्य जीवनशैली
तुलसीको पात खादा हुन्छ शरिरलाई यति धेरै फाइदाहरु, जान्नुहाेस् !
June 22, 2021 NepstokLeaveaComment on तुलसीको पात खादा हुन्छ शरिरलाई यति धेरै फाइदाहरु, जान्नुहाेस् !
तुलसीको पात खादा हुन्छ शरिरलाई यति धेरै फाइदाहरु, जान्नुहाेस् ! संसारको जुनसुकै भू-भागमा पनि पाईने यो वनस्पति हिन्दूहरूको लागि अत्यन्तै पुजनिय एवम उपयोगि वनस्पति हो । चिकित्सकहरूका अनुसार तुलसीमा सयौ रोग निको गर्ने क्षमता छ । यसमा पात, हाँगा, फूल, जरा, बीउ सबै उत्तिकै महत्व का छन् ।
यसले भोक जगाउने, रुचि जगाउने तथा पाचनक्रिया बढाउनुका साथै झाडा-वान्ता पनि रोक्ने कार्य गर्दछ । तुलसी रोपेको चारसय मिटर वरपरको वातावरणलाई तुलसीले सुगन्धले शुद्ध पार्छ भन्ने विश्वास छ । तुलसी, वटवृक्ष वरिपरि र तुलसीको छाया वरिपरि र यसको हावाको परिधिभित्र कुनै पनि वि-षाक्त की-टाणुहरू टिक्न सक्तैनन् र् दीर्घरोगीहरूसमेत तुलसीको सेवनले रोगमुक्त भएको कुरा वैज्ञानिकहरू पनि बताउछन् । तुलसिकाे पात खानुका यस्ता छन् फाइदाहरु:-
१) तुलसीका पातमा एन्टीब्याक्टेरियल, एन्टीफंगल र एन्टीबायोटिक गुणहरू हुन्छन् । यसकारण यसको प्रयोग रुघाखोकी र ज्वरोलाई कम गर्नका लागि गरिन्छ । आयुर्वेद अनुसार तुलसीको काँढा बनाएर पिउँदा ज्वरो घट्छ । २) धेरै दि-शा लागेमा ८-१० वटा तुलसीपात चौथाइ भाग जाईफल पिनेर खाएमा ठिक हुन्छ ।
३) तुलसीका पातको प्रयोग रुघाखोकी, पेट दु-खाइ, आँखाका समस्या, मधुमेह, कोलेस्ट्रोल, मा-इग्रेन, अव-साद लगायतका अनेकौं रोग निको पार्नका लागि गरिने देखाएका छन् । ४) आ-उँ, शु-ल परेमा १०–१२ तुलसीको पात मिश्रीसंग पिनेर खाने गरेमा ठिक हुन्छ र आवश्यकता परेमा एक हप्तासम्म खानु होला ।
५) तुलसीमा हुने पेन-कि-लर गुणले माइग्रेनका कारण हुने टाउको दुखाइलाई यसले कम गर्छ । दिनदिनै तुलसीका चारपाँचवटा हरिया पात चपाउँदा माइग्रेन भाग्छ । ६) दि-शामा र-गत आएमा १–२ चम्चा तुलसीको गे-डा आधा ग्लास पानीमा बेलुका भिजाएर बिहान खाने गरेमा ठिक हुन्छ ।
७) त्यस्तै तुलसीले रगतमा युरिक ए-सिडको स्तर घटाएर मिर्गौलालाई स्वस्थ राख्छ । चु-रोट खाने कुलत पनि तुलसीको पात चपाउँदा हट्छ । ८) अल्काई भएमा तुलसीको पात १०–१२ वटा खाएर पानीले निल्ने र तुलसीको पातको लेदो नरिवलको तेलमा फिटेर गुद्धद्वारको घा-ऊमा लगाउने गरेमा ठिक हुन्छ ।
९) तुलसीको पातमा एन्टीअक्सिडेन्ट गुण हुनाले यसले प्यानक्रियाटिक बीटा सेल्सको कामकाजमा सुधार गर्छ । इन्सुलिन सेन्सिटिभिटी बढाएर ब्लड सुगर कम गर्दै मधुमेह नियन्त्रण गर्छ । १०) बालतोड् घा-ऊ भएमा पिपलको कोपिला र तुलसीको पात पानीमा पिनेर बिहान–बेलुका लेप गर्नाले बालतोड् घा-ऊ ठिक हुन्छ ।
११) तुलसीमा हुने थाइमोलले छालासम्बन्धी समस्या ठीक पार्छ । यसले र-गत सफा गरेर अनुहारमा कान्ति ल्याउँछ । १२) घाँटी बसेमा घाँटी बसेर बोल्नै नसक्ने भएको छ भने १०–१२ पात तुलसी ४–५ दाना मरिच र मिश्रीको टुक्रासँग मिलाएर खादाँ घाँटी बसेको २–३ मात्रामै ठीक भएर आउँछ ।
१३) तुलसीले रक्तचाप र कोलेस्ट्रोल स्तरलाई कम गरेर मुटुलाई स्वस्थ राख्छ। दिनदिनै तुलसीको पात चपाउने मानिसलाई मुटुरोग लाग्दैन । १४) तुलसीले तनाव जन्माउने हर्मोन कार्टिसोललाई कम गराउँछ। त्यस्तै तुलसीले फ्री –याडिकल क्षतिबाट बचाएर तपाईंलाई तनाव हुन दिँदैन।